Oomama abakwiminyaka eyi-13 ukuya kweyi-19 nokuncancisa | La Leche League SA
OOMAMA ABAKWIMINYAKA EYI-13 UKUYA KWEYI-19 NOKUNCANCISA
Njengomama omncinci ngeminyaka, inoba uyazibuza ukuba uza kuyithini into yokuba nosana, ukuncancisa nokubuyela esikolweni. Ukuncancisa yindlela elula neyonwabisayo yokuba wena nosana lwakho nazane. Ukuncancisa ibele noba kukangakanani kungcono kunokungancancisi tu kwaphela.
UKUNCANCISA KUBALULEKILE KOOMAMA ABANCINCI NGEMINYAKA
Ngumsebenzi omninzi ukuba ngumama - ukuncancisa kwenza kube lula ibe akubhatalelwa.
Iintsana ezincanciswayo azifane zigule - awubinaxhala kakhulu, lincinci ixesha olichitha usiya ekliniki nophoswa ngalo sisikolo nongalichithi nabahlobo.
Ukuncancisa kukunceda ngendlela elula yokuba uluqonde usana lwakho ibe kukwenza uzithembe njengomama.
Ukuncancisa kukwenzela lula: ungancancisa naphi na, nangaliphi na ixesha ibe iqondo lobushushu lobisi lwakho lusoloko lulungile.
Ngoxa uncancisa qho akufane ube sexesheni, ibe uyazehlela emzimbeni.
Usenokungaqiniseki ukuba uceba ukuncancisa ixesha elide kangakanani. Kuzame ukuncancisa kangangeentsuku okanye iiveki ezimbalwa.
Ukuncancisa akuzukuwenza awe amabele akho – indlela amile namakhulu ngayo amabele akho iza kube sele itshintshile ngexesha okhulelwe ngalo.
Thetha nomhlobo okanye umntu omthembayo okwazileyo ukumncancisa ngempumelelo usana lwakhe.
Akumelanga kube buhlungu ukuncancisa – cela ukuncedwa ukuba ukuncancisa kunzima okanye kubuhlungu. Ukuncancisa uhleli kakuhle kwaye usana lulubambe lwangena ngaphakathi ibele kunokunqanda ukuba buhlungu kweengono.
Okukhona luncanca qho usana lwakho, okukhona uza kwenza ubisi olungakumbi. Luyeke usana luncance ngokufuthi kangangoko lufuna ibe uzame ukuchitha ixesha elininzi kangangoko ukuze ulwazi usana lwakho.
Ukuba ugqiba ekubeni ubuyele esikolweni, zama ukulinda de usana luyeke ukuba Lusana olubomvu. Ngelo xesha kusenokwenzeka ukuba usana lwakho sele luqhelile ukuba izinto zilandelelana njani ibe kuza kuba lula ukuceba usuku lwakho.
Ukuba ukhetha ukuqhubeka nokuncancisa xa ubuyela esikolweni, ungalukhama ubisi lwakho uze ulushiye nomntu ogcina usana. Ungaqala ukuqhelisela kwiiveki ezimbalwa ngaphambi kokuba ubuyele esikolweni.
Ceba ukuchitha ixesha elithile ekhaya nosana lwakho emva kwesikolo, nexesha lokufunda nelokuba kunye nabahlobo.
Kuza kuya kusiba lula njengoko lihamba ixesha ukuba nosana ngoxa usiysa esikolweni.
Oomama abaninzi abasebatsha ngeminyaka baye baphelelwe ngabanye babahlobo babo xa besiba nosana, kodwa baye bafumane nezinye ezintsha. Dibana nabanye oomama okanye abahlobo abakuxhasayo.